Kugadziridza Post Slugs muWordPress yeSEO | Martech Zone
Kugadziridza Post Slugs muWordPress yeSEO
Chitatu, September 2, 2009 Chitatu, July 9, 2014 Douglas Karr
Dzimwe nguva paunoita kiyi yekutsvaga kana blogging yekutsvaga injini optimization, iwe unogona kuona kuti yakawanda nhamba yevanotsvaga vanokanganisa-kuperetera kana concatenate mazwi. Muenzaniso unogona kunge uri USS Forrestal maringe Nhoroondo ye USS Forestal.
Kuratidzira mumhedzisiro yekutsvaga mazwi akapereterwa zvisizvo izano rinoshanda nemazvo… asi ungangoda kusanyora zvisirizvo izwi mune rako rekutumira zita kana mune yako zvemukati. Nguva dzose, mumwe munhu anonongedza iyo chikanganiso kunze kwauri!
Panzvimbo pekutaridzika unonyadziswa, tora mukana weimwe nzvimbo mune zvemukati kuti nemaune zvisirizvo-kuperetera izwi:
Your Tumira Slug (vhidhiyo pazasi)
Mukati memazita emazita mune anchor tag (zvinongedzo).
Pakati pezita kana tsananguro ma tag mumifananidzo.
Heino pfupi vhidhiyo pa maitiro ekugadzirisa yako post slug muWordPress. Usaite izvi mushure mekuburitsa blog posvo, hazvo! Paunenge uchinyora yako blog post, iwe unogona kugadzirisa yako post slug zviri nyore:
Tags: optimizepermalinkpost slugslugWordPresswordpress mvumo
Nei ndisingade Facebook
Madhimoni: Chirevo chevamwe Tiri!
Sep 2, 2009 pa 4: 26 AM
Zvinoita sekunge Camtasia ine zvakawanda zvinogoneka. Wakatenga software here, kana kuti urikungoyedza?
Sep 2, 2009 na12:42 PM
Sezvineiwo, hairatidzike yakasimba seye 'studio' vhezheni yeWindows. Asi zviri nyore kushandisa! Iyo interface inotevedzera iMovie zvakanyanya. Ndakaitenga payakabuda. Ini ndanga ndichishandisa Snap X Pro asi yakati kunyorera kwangu kwapera… handina kuzviziva aiva kunyoreswa! Izvi zvakanyanya kunaka.